कति कमाउँदा राज्यलाई कति कर तिर्नुपर्छ ? यस्तो छ नयाँ आयकर दर – Jaljala Online
कति कमाउँदा राज्यलाई कति कर तिर्नुपर्छ ? यस्तो छ नयाँ आयकर दर
Posted on July 19, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
साउन ३, काठमाडौं । व्यवसाय, रोजगारी वा कुनै आयआर्जन गरेपछि राज्यका हरेक नागरिकले सरकारलाई कुनै न कुनै रूपमा कर बुझाउनैपर्छ।
जानाजान वा अन्जानमा तपाईंले कर नबुझाए सरकारी कारबाही तथा जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ।
४ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशतको दरमा ४ हजार रुपैयाँसम्म
४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा १० प्रतिशतको दरमा थप १ लाखको १० हजार गरी १४ हजार रुपैयाँसम्म
५ लाख रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा २० प्रतिशतका दरले थप ४० हजार गरी ५४ हजार रुपैयाँसम्म
७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको हकमा ३० प्रतिशतको दरले थप ३ लाख ९० हजार गरी ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँसम्म
२० लाखभन्दा बढी आम्दानीको हकमा भने ७ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ। यसको अर्थ २१ लाख आम्दानी हुनेले ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्ममा १ प्रतिशतका दरले ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म थप १० प्रतिशतका दरले १० हजार गरी १४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
५ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको हकमा थप २० प्रतिशतका दरले ४० हजार गरी ५४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा थप ३० प्रतिशतका दरले ३ लाख ७५ हजारसमेत गरी ४ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म
कुनै पनि कम्पनी तथा फार्मले साउनदेखि सबै कर्मचारीलाई बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसमा प्यान नम्बर उल्लेख हुनुपर्छ।
मलेसियाले नेपाललाई गर्यो यस्तो अनुरोध
Posted on August 29, 2019 Author Jaljala Online
भदौ १२, काठमाडौँ । मलेसिया सरकारले मापदण्ड पुगेका सुचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई अनुगमन तथा निरिक्षण गरी बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गर्ने जनाउदै नेपाल सरकारलाई श्रम समझदारी पत्र अनुसार कामदार पठाउने प्रक्रियालाई सुचारु गर्न अनुरोध गरेको छ । यो खबर होम कार्कीले कान्तिपुरमा लेखेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थालाई सुचीकृत […]
शिक्षकको नाममा यस्तो नोट लेखेर विद्यार्थीले किन गरे अप्रिय निर्णय ?
साउन १२, महेन्द्रनगर । महेन्द्रनगरस्थित श्री लिटिल बुद्ध कलेजमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले ‘सुसाइड नोट’ लेखेर आत्महत्या गरेका छन्। यो खबर गोकुल जोशीले नेपालखबरमा लेखेका छन् । कलेजको कक्षा १२ व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत भीमदत्त नगरपालिका भाँसीका सुरज लेखकले ‘सुसाइड नोट’ लेखेर आत्महत्या गरेका हुन्। उनले आत्महत्या गर्नुपूर्व लेखिएको ‘सुसाइड नोट’ मा कलेजका एक जना शिक्षकको नाम […]
‘सिरिन्ज’ आक्रमणकारी दिए यस्तो अचम्मको बयान, यसरी गर्थे आक्रमण [भिडियो]
Posted on June 28, 2019 Author Jaljala Online
असार १३, काठमाडौं । युवतीमाथि कथित रुपमा ‘सिरिन्ज’ आक्रमण गर्दै आतंक फैलाएको अभियोगमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा महाराजगन्जमा रेस्टुरेन्ट चलाउँदै आएका ३० वर्षीय सन्तोष कार्की रहेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र अपराध महाशाखाको टोलीले उनलाई गएराती महाराजगञ्जबाटै पक्राउ गरेको हो । उनी श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा युवतीमाथि तिखो बस्तुले हान्दै […]